किन सामाजिक नेटवर्क र संगीत स्ट्रिमहरूमा SMM प्रयोग गर्ने?
सामाजिक नेटवर्क को लागी धन्यवाद, तपाई आफ्नो दर्शकहरु लाई आफ्नो ब्रान्ड मा संलग्न महसुस गर्न को लागी सक्षम गर्नुहोस्। यहाँ तपाइँको दर्शकहरु संग काम गरीर, तपाइँ उपभोक्ताहरु बीच विश्वास को स्तर को वृद्धि गरेर आफ्नो सेवा सुधार गर्न सक्नुहुन्छ।
तर, सामाजिकमा "जाँदै" भन्दा पहिले। नेटवर्क, तपाई आफैले निर्धारण गर्नु पर्छ कि तपाईलाई र तपाईको व्यवसायलाई यसको आवश्यकता छ कि छैन। के तिनीहरू सामाजिक मा भन्छन्? तपाइँको जस्तै उत्पादनहरु को बारे मा नेटवर्कहरु? त्यहाँ एक सामाजिक छ। तपाइँको लक्षित श्रोतालाई नेटवर्क गर्दछ र यसको खण्ड के हो?
र एक अर्को, सब भन्दा निर्णायक कारक: के तपाईंसँग नेटवर्कमा तपाईंको श्रोतालाई भन्नुपर्ने केहि छ?
अब हामी कहाँ जाने बारे कुरा गरौं (कुन सामाजिक नेटवर्क तपाईं इन्टरनेट मा आफ्नो प्रोजेक्टहरु प्रबर्धन गर्दा छनौट गर्नुपर्छ)।
साइटहरू छनौट गर्दा जुन तपाईं आफ्नो पदोन्नतीमा संलग्न हुनुहुनेछ, यो नोट गर्नु पर्दछ कि तपाईंलाई तत्काल सबै अवस्थित मिडियामा "जानु" आवश्यक पर्दैन।
तपाईको लक्षित श्रोतालाई के मन पर्छ भन्ने विश्लेषण गर्नुहोस्, र तपाइँका पृष्ठहरूलाई त्यहाँ नेतृत्व गर्नुहोस्। प्राय: सबै भन्दा लोकप्रिय सेवाहरू हुन्: फेसबुक, इन्स्टाग्राम, ट्विटर, यूट्यूब, साउन्डक्लाउड, स्पोटिफाई, एप्पल म्यूजिक आदि।
महत्त्वपूर्ण! तपाईं आफ्नो साइट को ट्राफिक गतिविधि गुगल एनालाइटिक्स को प्रयोग गरेर सामाजिक नेटवर्क को माध्यम बाट देख्न सक्नुहुनेछ।
सामाजिक सञ्जालहरूको बारेमा कुरा गर्दै, यो ध्यान दिनुहोस् कि सबै भन्दा "स्थापित" र सॉल्भेन्ट श्रोताले फेसबुक प्रयोग गर्दछ।
ट्विटर सायद सबैभन्दा लोकप्रिय माइक्रोब्लग हो, तर यसमा सञ्चार तत्काल हुनुपर्दछ। तपाईंले निरन्तर ट्विटर अनुसरण गर्न आवश्यक छ र यो बिर्सनु हुँदैन यो धेरै महत्त्वपूर्ण छ।
युट्युब संसारमा सब भन्दा राम्रो भिडियो होस्टिंग साइटहरू मध्ये एक हो। यसले अरबौं भिडियोहरू समावेश गर्दछ। धेरै प्रयोगकर्ताहरू ब्रान्डमा संलग्न हुन्छन्, YouTube मा यसको विज्ञापन देखेर। यो नेटवर्क प्रयोगकर्ताहरूको एक उच्च "विश्वास को क्रेडिट" छ।
महत्त्वपूर्ण! जब तपाइँ सामाजिक नेटवर्कमा पृष्ठ सुरू गर्नुहुन्छ, तपाइँको आधिकारिक साइटमा यसको बारे सूचित गर्न नबिर्सनुहोस्!
कसरी जाने बारे बोल्दै (हामी वास्तवमा सामाजिक नेटवर्कमा अगाडि बढाउन के गरिरहेका छौं), हाम्रो मतलब ती सबै कार्यहरू जुन प्रयोगकर्ताहरूलाई रुचि हुन सक्छ।
सर्वप्रथम, यो प्रतियोगिताहरू (संलग्नता, कार्यको लागि कल), स्वीपटेक्स (श्रोताको पहुँच विस्तार गर्दै), पदोन्नतीहरू र बोनस प्रोग्रामहरू (यसका ग्राहकहरूको लागि मात्र), आदि हुन सक्छ।
दोस्रो, विशेष परियोजनाहरु। यी छोटो प्रोजेक्टहरू हुन् जुन विशिष्ट रूपमा विशिष्ट छन्, ठूलो चासो र राम्रो प्रतिफल छ।
र तेस्रो, यो केवल उपयोगी लेखहरू, निबन्धहरू, भिडियोहरू, सुझावहरू वा कार्यशालाहरू हुन सक्छ जुन तपाईंको जनताका लागि चाखलाग्दो हुनेछ र उनीहरू आफ्ना साथीहरूसँग यो जानकारी साझा गर्न पाउँदा खुशी हुनेछन्।
सामग्री दिन प्रयास गर्नुहोस् जुन प्रयोगकर्ताको मुडसँग मेल खान्छ। तपाई हप्ताको दिन द्वारा शीर्षकहरु पनि बिच्छेद गर्न सक्नुहुन्छ।
सोमबार - सप्ताहअन्तको भोलिपल्ट, जब प्रयोगकर्ताहरू (प्राय: प्रायः) उदास मूडमा छन्, लामो काम गर्ने हप्ताको प्रत्याशामा, यस दिन सूचनाहरूको ठूलो प्रवाहको साथ प्रयोगकर्ताहरूलाई "लोड" गर्नुहुन्न।
मंगलबार एक राम्रो दिन हो, सबैजना सक्रिय रूपमा काममा संलग्न हुन सुरू गर्दै छन् र नयाँ जानकारी "उपभोग" गर्न तयार छन्।
बुधवार हप्ताको सब भन्दा उत्पादक दिन मानिन्छ, किनकि सबैले सक्रियताका साथ काम गरिरहेका छन् र एकै साथ तिनीहरू धेरै ड्रा र प्रतिस्पर्धाहरूमा धेरै सक्रियतासाथ भाग लिन सक्दछन्।
बिहीबार, सबै प्रयोगकर्ताहरूले सहज रूपमा सप्ताहन्तको बारेमा सोच्न थाल्छ, र यस दिन जानकारीको धारणा गिरावटमा छ, जबकि उपयोगी सामग्री जुन "बाँधिएको" साप्ताहिक सप्ताहमा राम्रोसँग बुझिनेछ।
सबैजना शुक्रबार एक सप्ताहन्तको योजना गर्दैछन्, त्यसैले सामग्री सुसंगत हुनुपर्छ।
शनिवार र आइतवार - दिन छुट र प्रयोगकर्ताहरू अफलाईन आफ्नो समय अफलाईनमा खर्च गर्छन्, यस आधारमा, तपाईं सोमवार सम्म विश्राम लिन सक्नुहुनेछ।
दिनमा तीन पटक भन्दा बढि सामग्री अद्यावधिक गर्ने प्रयास गर्नुहोस्, र सबै चीज संरचित गर्नको लागि छोटो विषयगत हेडिingsहरू राख्न धेरै सुविधाजनक हुन्छ (केवल तिनीहरूका विषयहरू हप्ताको दिनहरूमा "गाँसिन सकिन्छ")। तपाईंको सामग्री सिर्जना गर्न एक गैर-मानक र रचनात्मक दृष्टिकोणको साथ, तपाईंको ग्राहकहरूको दर्शक बढ्नेछ।
याद गर्नुहोस्, तपाईले पोस्ट गर्नु भएको सबै जानकारी अनलाइन हुनु पर्छ। यदि यस्तो हुँदैन भने, विश्लेषण गर्नुहोस्, सायद तपाई गलत जानकारी दिदै हुनुहुन्छ वा गलत श्रोता।
तर, तपाइँ प्रयोगकर्तालाई कुन सामग्री प्रदान गर्नुहुन्छ भनेर सोच्नु अघि, यो महत्त्वपूर्ण हो कि उनीहरूसँग तपाइँको सञ्चार विशेष रूपमा कसरी निर्माण हुन्छ भनेर निर्धारण गर्न महत्त्वपूर्ण छ।
के तपाईं ब्रान्डको रूपमा आफैलाई सिर्जना गर्नुहुन्छ र आफ्नै तर्फबाट सञ्चार सञ्चालन गर्नुहुन्छ, तर कम्पनीको प्रतिनिधित्व गर्दै र प्रयोगकर्ताहरूसँग सम्बन्ध सिर्जना गर्नुहुन्छ, वा यो कम्पनीको पृष्ठ हुनेछ जुन तपाईं वा कम्पनीबाट अन्य कसैले सञ्चालन गर्दछ, तर गुप्त, बढाउनको लागि मान्यता विशेष रूपमा ब्रान्ड।